Ukuvumisa ngeNkwenkwezi kwiNdawo kwiKhaya lakho - Khetha Uphawu
Ukuvumisa ngeNkwenkwezi kwiNdawo kwiKhaya lakho
Indlela yethu yonke kwinyani kunye neemeko ebomini bethu ichazwa lihlabathi lemikhwa esiyithatha yonke imihla. Oku kuboniswa yi Inyanga , indawo yayo, isidima kunye nemiba kwitshathi yendalo. NgeNyanga iluphawu olucacileyo lwekhaya esihlala kulo, Ukuvumisa ngeenkwenkwezi sisixhobo esinamandla sokusinceda sondle imigca yeplanethi ethile kwaye sincede ukuhamba kwamandla ngendlela esiyidalayo. Sele sixubushe ngesi sihloko apha kwibhlog yethu kwaye sinqwenela ukuzibophelela kuso ngendlela esebenzayo ngeli xesha.
Ukufumana imigca yakho
Inyathelo loku-1. Ukuqala, zenzele itshathi yombono wesixeko ohlala kuso. Yitshati ekhethekileyo esebenzisa uqikelelo lweplanethi kwindawo encinci yomphezulu weplanethi yoMhlaba kwaye ithetha ngeemvakalelo zethu ezizimeleyo kunye noqhakamshelwano esinalo ngokumisa kwethu kwiradiyasi ethile. Gcina ukhumbula ukuba le tshati kufuneka ilungelelaniswe ngokuchanekileyo ukuze ilingane amacala ehlabathi, kwaye kuxhomekeke kwisoftware yakho, kuya kufuneka uyiguqule ukuze ibe necala layo laseNtshona kwicala lasekhohlo, kunye neMpuma kwicala lasekunene. Nje ukuba unayo le tshati, zoba imigca emibalabala yeplanethi nganye kumbindi wetshati ukuya kwelinye icala lesangqa sezodiac.
Inyathelo lesi-2. Thatha iskimu sendlu yakho okanye indlu ngobungakanani obuchanekileyo. Umbindi uya kufumaneka xa usenza uxande olubandakanya ii-engile zalo ezikude kwaye uzobe idiagonals ukuwela iindlela. Ngokuxhomekeke kwisicwangciso, iziko linokufumaneka ngaphandle kwekhaya lakho. Beka ikhampasi embindini weflethi kunye nakumbindi weskimu kwaye uzobe amacala ehlabathi ngokuchanekileyo njengoko unako.
Nje ukuba ugqibile, seta embindini wetshathi yakho yehorizon embindini wekhaya lakho, dibana noMantla noMntla, kwaye ubone ukuba iphi na imigca yeplanethi ukuze ukwazi ukondla iimfuno zabo, nganye nganye. Isiphumo sesona sinamandla ngaphakathi malunga neesentimitha ezili-10 kwicala ngalinye lomgca, kodwa akunakulimaza ukugubungela indawo enkulu yezicwangciso ezixhamlayo onqwenela ukuzigxininisa okanye iingxaki onqwenela ukuzisombulula nge-bang.
Itshathi yeHorizon ibonelela ngolwazi malunga nendlela esibona ngayo indawo ethile kwinqwelomoya engaphantsi kwengqondo. Ibonisa indlela esiziva ngayo kunye nento esiyivusayo ngokuziva intliziyo yethu ihamba ngeendlela ezithile kunye nakwizikhundla ezithile, kungekhona nje kwikhaya lethu, kodwa nakwisixeko esihlala kuso. Isinika ithuba lokufumana indawo efanelekileyo. , yolula imiba emingeni kwaye uyibone kwimbono entsha, kwaye utshintshe imiqobo yeemvakalelo kunye nemiqobo kwihlabathi lethu lemikhwa kunye nokutshintsha okulula kwimbono. Kuthatha ixesha ukuba siziqhelanise kwaye samkele utshintsho esiluphumezayo kwindlela yethu ke yiba nomonde kwaye ujonge indlela iimvakalelo zakho ezitshintsha ngayo. Kungcono ukuhamba kwinkqubo ngokucothayo ukuze ukhanyise ukukhanya kwiinguqu zangaphakathi kwaye uzifake kwi-metabolite nganye nganye. Oku kuzisa ukuzazi kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo kwaye kusinceda sibone ukuba nzulu kangakanani na esinokuphembelela ubomi bethu ngeziphumo esinazo kwindawo esihlala kuyo imihla ngemihla.
Umbindi wekhaya lakho kufuneka ungabi nanto kwimeko efanelekileyo kwaye uhlale ucocekile. Yindawo yamandla akho kunye nembewu yayo yonke into eyingqongileyo. Ngelishwa, ayisoloko iyindawo esinokuchaphazela kakhulu, ngakumbi xa ibekwe eludongeni olungqindilili okanye kwindlu yethu yangasese. Izicwangciso ezinjalo zifuna ingqalelo ekhethekileyo, njengoko zithetha ngamatyala e-karmic kunye nokubandakanyeka kwimibandela enzima kakhulu ukuba singayithwala. Udonga olubekwe apha lubonisa imida ekufuneka imiselwe ngaphambi kokuba ubomi buqhubele phambili nokuhamba ngendlela ethambileyo kwaye inika isivakalisi esikhethekileyo kwimiba ISaturn kwitshathi yakho.
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza kwimigca yakho, coca ikhaya lakho kwizinto ezaphukileyo, ezingasebenziyo, okanye ngaphandle kwenjongo. Nangona ubuhle bunokufunyanwa kwinto eyaphukileyo kwaye incamathelisiwe, mhlawumbi oku ayingomandla onqwenela ukuwagcina. Landela imvakalelo kwaye uhlale uyazi ukuba ukhetha ukubambelela kwizinto ezinjalo. Ezinye iindawo zinokukhokelela ekungasebenzini kakuhle, imingxunya eludongeni, imibala ephelelweyo, okanye ukuvuza kwamanzi. Bafuna ingqalelo rhoqo kwicala lakho. Kuyanceda ukuhlala unenkani apha kwaye ubambe umhlaba wakho xa umgca ufuna ukuvuselelwa kwaye uzise ukusebenza nokuba unzima kangakanani okanye unyanzelisa ukuba ngamanye amaxesha.
Amathafa kunye negadi, ukuba unayo, vula imbono yethu kodwa udlale indima encinci kulungelelwaniso lwemigca ngaphakathi kwekhaya lakho. Jonga umhlaba wangaphakathi kuqala kwaye wongeze iinkcukacha kwihlabathi langaphandle kamva. Qinisekisa ukuba ikhaya lakho linomoya owaneleyo, umoya omtsha, kunye nokukhanya okwaneleyo yonke imihla. Nangona unokuyonwabela indawo epholileyo, enomthunzi, ukukhanya kwelanga kubalulekile kumandla akho abalulekileyo kwaye kufuneka kungeniswe, ubuncinane ngeeyure zakusasa, xa uvuka. Nangona oku kuwela kwindawo yolwazi ngokubanzi, yinxalenye yendlela yakho yokuvumisa ngeenkwenkwezi, kuba ngamnye wethu ufumana amandla okudala kunye novuyo kwimimandla Ilanga kwaye sisoloko sifuna ukukhanya okungakumbi kubomi bethu bemihla ngemihla. Ukuhamba komoya kunxulumene ne Iimpawu zomoya kwaye azinasisa ngeLanga. Uqhagamshelo olusebenzayo lwemihla ngemihla kwezi zibini luvumela ingqondo ukuba idibane nomthombo wakho wangaphakathi oyinyaniso wobuchule kunye namandla omntu-iLanga, ukuphakamisa ulwazi ngenyathelo elinye elincinci ngexesha kwaye likukhulule kwiimpembelelo ezingafanelekanga zabanye abantu kuloliwe wakho wokucinga kunye ukuzithemba kwakho.
Ukunika amandla imigca yakho kufuneka iqale ngotshintsho kumthwalo iiplanethi , abo bakwindla okanye ukonakalisa, yakho indlu yesibhozo irula, ukunika isimboli sabo indawo engakumbi yokuphuhlisa ngendlela ephilileyo. Kuqhelekile ukuba le migca ingahoywa okanye ixinene, ngoko ke ungothuki ukuba Jupiter umgca ufumene indlela yokuya kumgqomo wenkunkuma xa ingumlawuli wakho wendlu yesibhozo, okanye umgca wakho weLanga eliwileyo udlula kude nakuphi na ukukhanya okanye iifestile kwaye uqonde ngqo kwindlu yangasese. Izinto esingenako ukuzichaphazela kakhulu zisenokulungiswa kwaye zinyangelwe kwinqanaba elithile, ngoko ke yamkela useto lwakho lwangoku, njengoko lunjalo, kwaye ufumanise iindlela zokuzisa utshintsho oluncinci oluya kwenza umahluko. Ngokuhamba kwexesha, ukhetho olutsha luya kuvuleka ngokuqinisekileyo njengoko amandla abambekayo ukusuka kwixesha elidlulileyo eqala ukuqukuqela kwakhona, kwaye amanye amaqhina akhululwa ngobubele.
Indima Emandla Yokuvumisa Ngeenkwenkwezi
Siza kupapasha isethi yamanqaku ukuchaza umgca weplanethi nganye kwithoni yayo ethile. Ngamnye kubo kufuneka ahlonitshwe kumacala omabini endlu yakho, ngombala okanye enye isimboli ehambelana nemfuno yayo. Cinga ngezi ndawo njengezibingelelo ezincinci ezikhonza ukuhlonipha iziqwenga zakho ezifuna ukuphiliswa kunye nokutshintsha. Gcina ukhumbula ukuba nganye ifuna ukuhoywa, kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba ezinye zazo zifunyanwe zingenanto, zingondliwa, zixinene okanye zixinene. Iindawo ezingacocekanga kunye nezo zisebumnyameni zizalathisi kwizinto esinqwenela ukuphepha ukujongana nazo kunye nemicimbi ephuma lula kulawulo lwethu.
Ikhaya ngalinye linokugqalwa njengento ephilayo, eguquguqukayo ekuhambeni kwexesha. Ezinye zeemfuno zakho kuyo zisempilweni kwaye zisendaweni, ezinye zinokukukhokelela ngqo kwimiba onokuthi uyiphephe. Oku kubonakaliswa ngokuthe ngqo kwiimfuno kunye neemeko esizidalayo kwindlela yoMphefumlo wethu ngaphandle kweenkolelo kunye neembono ezinokuthi zicinywe, zifunyenwe ziphelile kumgca wokhokho bethu. Mhlawumbi ungakhetha ubomi bakho ngokweenkcukacha, kwaye ukuba i-Astrology ibotshelelwe ukuzisa inkululeko ngayo Umzi wasemanzini indima, oku kubonakala njengendlela ebalaseleyo yokuqala ukusebenzisa iingenelo zayo eziphathekayo. Nangona kungenakwenzeka ukufumana useto olugqibeleleyo, uya kufumanisa ukuba notshintsho oluncinci luchaphazela ilizwe lakho langaphakathi ngokuhamba kwexesha.
Yonwabele inkqubo, ukhulule kuyo yonke into ongasayidingiyo, kwaye siya kukubonelela ngolwazi olungakumbi kwiiveki ezizayo.
Emanzini Iponti Leo Pisces I-Capricorn